Wadahadalkii Masar, Suudaan Iyo Itoobiya Ee Biyo Xidheenka Niil Oo Fashilmay – somalilandtoday.com
Wadahadalkii Masar, Suudaan Iyo Itoobiya Ee Biyo Xidheenka Niil Oo Fashilmay
(SLT-Addis Ababa)-Wareegii ugu dambeeyay ee wadahadaladii u dhaxeeyay Masar, Itoobiya iyo Suudaan ee looga hadlayay biyo xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ayaa soo dhamaaday iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin.
Wufuudda saddexda dal waxay kulmeen iyagoo isku dayaya inay jabiyaan ismari waaga wadahadallada biyo xidheenka weyn ee Itoobiya ay ka waddo webiga Niil, mashruuca Addis Ababa ayaa ku tilmaantay inuu fure u yahay horumarintiisa dhaqaale iyo soo saarista awoodda korontada.
“Mawqifkani wuxuu mar kale muujinayaa la’aanta Itoobiya ee rabitaan siyaasadeed oo ay kula xaajooto niyad wanaag,” ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibedda ee Masar.
“Haddii aan loo wajihin wadaxaajood cusub, waxaa fursad loo helayaa in Itoobiya ay fuliso qorshaheeda isla markaana ay qatar geliso dhammaan shucuubta gobolka,” ayay tidhi Mariam al-Sadiq al-Mahdi. Saraakiisha Itoobiya wax hadal ah oo degdeg ah kamay bixin.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sisi wuxuu yidhi “waxaa jiri doona xasillooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka” haddii sahayda biyaha ee Masar ay saameyso biyo xireenka.
Itoobiya waxay sidoo kale sheegtay in Masar iyo Suudaan ay la yimaadeen qodobo aan ka mid ahayn ajendaha, sida dib u dhigista buuxinta GERD ilaa heshiis laga gaadhayo.
Taasi waa saddex jibaar ka badan xaddiga biyaha ee ku keydsanaa GERD markii ugu horreysay ee la buuxiyay sannadkii hore, taasoo saameyn ku yeelatay saldhigyada biyaha iyo qaar ka mid ah beeraha ku teedsan wabiga Nile oo saameyn ku yeeshay biyo-gelinta shan milyan oo qof oo dalka ku nool.